XASAASI:Cali Khaliif oo dhabar jabin culus kawada Muqdisho, Biixi & Denni fadhi uma yaalo + Gurmadka Farmaajo..
MUQDISHO(P-TIMES)- Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka socday kulamo iyo shirar uu hor boodayo Proff. Cali Khaliif Galaydh oo ah hogaamiyaha Khaatumo, kuwaas oo inta badan diirada lagu saarayo qorshayaal kala duwan oo ku aadan dalka.
Doorashada soo socota ee sanadka 2021 ayaa qayb ka ah kulamadani, waxaana Cali Khaliif Galaydh uu xooga saarayaa haatan sidii xildhibaanada Baarlamaanka Somalia kasoo gala deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn sidii loogu dooran lahaa gudaha magaalada Muqdisho taas oo ay ka qayb qaadanayaan xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo shakhsiyaad kale oo kasoo jeeda deegaanada SSC.
Damaca ugu weyn ee Mr. Galaydh ayaa lagu sheegay sidii loogu dhisi lahaa maamul u gaar ah deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn kaas oo la sheegay in lagu midayn doono Beelaha Warsangeli iyo Dhulbahante.
Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayuu u bandhigay qorshihiisa kuwaas oo iyaguna muhiimad gaar ah siinaya si cadaadis xoogan ay u saaraan dhinacyada Puntland iyo Somaliland oo ay dowladdu xiligani ku wajihi doono awood siyaasadeed oo aad u culus.
Ganacsato, Qurba joog iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda ayaa la sheegay in uu garab ka haysto Galaydh, kuwaas oo dadaal badan ku bixinaya hirgelinta maamul cusub oo ay dowladdu taageersan tahay.
Maanta oo ay tahay Sabti ayaa waxaa Hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho ka dhacay kulan u dhaxeeyey Cali Khaliif Galaydh iyo dhalinyarada kasoo jeeda deegaanada SSC, kuwaas oo qaarkood ay u hanqal taagayaan kamid noqoshada maamulkiisa iyo xildhibaanada Baarlamaanka Somalia ee soo socda oo uu Galaydh dadaal ku bixinayo in aanan lagu dooran magaalada Garowe.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni oo haatan xidhiidh wanaagsan xukuumaddiisa kala dhaxayn madaxda Somalia ayaa isna fara gelin u arka qorshaha Cali Khaliif, taas oo sababi karta in xidhiidhka aan haatanba wanaagsanayn ee Puntland iyo dowladda federaalka uu cirka isku sii shareero mar kale.
Hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa isna ku doodaya in deegaanadaasi ay ka tirsan yihiin Somaliland, waxaana la rumaysan yahay in awood dagaal uu kala hor iman doono maamulkan cusub hadii uu hirgalo.
Madaxweyne Farmaajo laftiirsa ayaa fursad u arka qorshaha Cali Khaliif si uu iskaga dajiyo cadaadiska ka saaran Puntland iyo Somaliland iyo in awoodiisa uu ku balaadhiyo goboladda dalka si deegaano badan uu uga helo cid taageersan isaga iyo dowladdiisaba inta aanan la gaadhin doorashada soo socota.